25 Responses to “ပျံသန်းခြင်း”
သူတစ်ပါးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို စာနာစဉ်းစားပေးတတ်တဲ့..ဂျွန်ရဲ့စိတ်လေးက ချစ်စရာ..လေးစားစရာပါဘဲ..။
တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်မတို့ဟာ စိတ်ကရှိပေမယ့်..ငါမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး... ငါမတတ်ပါဘူး..ဆိုတာနဲ့
လမ်းတစ်ဝက်မှာ ရပ်တန့်ပစ်တတ်ကြတယ်..။ ဂျွန်လိုစိတ်မျိုးမွေးနိုင်အောင် ကျိုးစားရမယ်ချောရေ..။
ဂျွန်လေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က ချီးကျူးစရာလေးနော်။ သူလိုစိတ်ဓါတ်မျိုးဖြစ်အောင် အားလုံးကြိုးစားကြရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ။
:))... ဒီလိုစိတ်ဓါတ်လေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ကလေးတွေကို ရိုက်သွင်းပေးနိုင်ရင် အနာဂတ်ကတော့ သိပ်ကိုသာယာနေမှာပဲ.. ခုတော့... အင်း..
ဂျွန်လို စိတ်ဓာတ်လေး တွေ လူတိုင်းမှာ အမြဲတမ်းပေါက်ဖွား လာခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်တော့ လောကကြီးက ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ လောကကြီးဖြစ်လာမှာ အမှန်ပါပဲဗျာ... သူလို စိတ်ဓာတ်မျိုးလေး ထားနိုင်အောင်တော့ ကျွန်တော်တို့ လည်း ကြိုးစား လိုက်ပါအုံးမယ်..
ဂျွန်လေး ရဲ့ စိတ်သဘောထားလေး က သဘောကျစရာပဲနော်..။
ကျွန်တော်လည်း ဒီလို စိတ်မျိုး မွေးနိုင်အောင် ကြိုးတော့ ကြိုးစားနေတာပါပဲ...
အဲ..ကြိုးစားတဲ့ အဆင့်မှာပဲ တန့်နေလေတော့.....
ဂျွန်ရဲ့ စိတ်ထားက သဘောကျစရာပါပဲ။
ဖတ်ရတာ ကောင်းတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒါ ဂျာနယ်မဟုတ်ဘူး။ သရပါ မဂ္ဂဇင်း။ ထုတ်တာ ကြာပီ။ အတွဲ2တောင် ရောက်နေပီ။ ခု ခန့်ပီးပီလေ။ အယ်ဒီတာချုပ် မင်းအုပ်စိုး။ အယ်ဒီတာက နာမည်လှလှလေးနဲ့ ကောင်မလေး သုံးယောက်။
မယ်ချောဆီလာရင် ဘာသာပြန်ကောင်းလေးတွေ အမြဲဖတ်ရတာပဲ..
အစ်မချော....ဖတ်လို့ကောင်းပြီး အတုယူသင့်တဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် :)
Yap.. that'sameaningful post.
All the way, we only think about Getting instead of Giving..
And by the time, we are giving, we can feel that getting something.
Anyway, u've highlight the peak point. Asamoral of speech,"That's Nice Post".
And try to createabit long story.. so that u can raise the emotion of readers.
ဖတ်သွားပါတယ် ... အစ်မချော
ချော - - - ရေ
ဘိုးရှိစရာကောင်းလိုက်တာ-ဂျွန်နဲ့ မိုက်ကယ်တို့ ပျံသန်းနေပုံကလေးကိုစိတ်ကင်မရာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်း
တင်သွားတယ်ဗျို့( ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးသို့ ဆန့် တန်းရင်းခြေလှမ်းတွေတဖြေးဖြေးမြန်
မြန်လာရင်းပြေးလိုက်ပြီဗျို့)
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ..။ကိုယ်တောင် သူတို့နဲ့ ပြေးလိုက်သွားမိသလို စိတ်ပါသွားတယ်။ စေတနာရှင်ချောရဲ့ ဘာသာပြန်လေးအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
တန်ဖိုးရှိတဲ့ပို့စ်လေးပဲ မချော ဖတ်လိုက်ရတာ အ၇မ်းတန်ဖိုးရှိတယ်
ဂျွန်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေး အရမ်းလေးစားဖို့ကောင်းတယ်။ အတုယူသင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးပါပဲ။ ညီမတို့လဲ ကြိုးစားရအုံးမယ်။ အရမ်းကောင်းတယ် မမချောရေ.
ဖတ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းလိုက်တာ လူတွေ ဟာ အဲလိုသာ မေတ္တာတရား တွေနဲ့ နေသွားကြရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ
အတုယူစရာ စိတ်ဓါတ်လေးကိုလာဖတ်သွားပါတယ် မမ....
ဖြူစင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကလေး..တခုပေါ့ မချောရယ်...
Right ........ We should be .....
ကျွန်တော် သတိထားမိတာ တစ်ခုရှိတယ် ဒီပို့(စ်)မှာထူခြားတာတစ်ခုပါ ကျန်တဲ့သူတွေတော့ဖတ်ပြီးဘာဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ မိုက်ကယ်လေးကိုအရမ်သနားသွားမိတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက လမ်းလျှောက်ချင်နေတဲ့သူတစ်ယောက် သူပြောလိုက်တာက“အဖေရေ… သားလေထဲမှာ ပျံနေပြီ.. လေထဲမှာ ပျံနေပြီ” တဲ့လေ သူ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ သူခံစားရတာက တစ်ခြားဆီပဲ လေ
မိုက်ကယ်လေးဟာ သူဖြစ်ချင်တဲ့ လမ်းလျှောက်လိုတဲ့ ဆန္ဒ မပြည့်ဝသော်လည်း ပျံသန်းခွင့်ကို သူ ရလိုက်တယ်လေ... ဒီလို ပျံသန်းလိုက်ရလို့ သူလဲ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်သွားရပါတယ်.. ဂျွန်ဟာ လမ်းလျှောက်လိုတဲ့ မိုက်ကယ်ရဲ့ ဆန္ဒကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပေမဲ့ မိုက်ကယ်လေး ပျော်ရွှင်သွားအောင်တော့ ပျံသန်းနိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်.. အဓိကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ပြောချင်တာက ဂျွန်ဟာ သူကိုယ်တိုင်က သူ့ဆန္ဒတွေ မပြည့်နိုင်ပေမဲ့ သူတစ်ပါးကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးတတ်တယ်ဆိုတာလေးပါဘဲ...